How to setting ! — MYSTERY ZILLION
How to setting !
September 2009 edited October 2009 in Help Desk
JAP & Your Freedom ကိုစက်ထဲမှာ install လုပ်ပြီးပါပြီ။Setting မထိုင်တက်လို့၊အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးကြပါဦး။
Status---confingure----ကိုသွားပါ။SOCKS4/5 DNS looks up sever နဲ. Use true SSL with HTTPS ကလွဲရင် ကျန်တာတွေအားလုံးကို အမှန်ချစ်ပေးပါ။ပြီးရင် use wizard ကို ကလစ်။ next ကိုဆက်သွား။ကိုယ်သုံးနေတဲ. ပရော်ဇီ ကိုဖြည်.ပါ။ နိုးပရော်ဇီ သုံးနေတယ်ဆိုပါတော. ။ဘာမှ မဖြည်.လို.ရတယ်။ Next ကို ဆက်သွား။ user name နဲ. ပတ်၀တ်ကိုဖြည်.ပါ။ အကောင်.မရှိသေးရင်
မှာ သွားလုပ်လိုက်ပါ။ next ကိုဆက်သွား။select protocol မှာ အကုန်လုံးကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်။ အဲဒီ မှာ အကို သုံးလို.ရမယ်. ဆာဗာ ကို ဖရီးဒမ်းကစရှာပါလိမ်.မယ်။သူရှာပြီးသွားရင် ဇယားကွက်ကြီးပေါ်လိမ်.မယ်။အဲဒီမှာ Http နဲ. Https ကို yes လို.ဖြေထားတဲ. အကွက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။တတ်နိုင်သမျှ အပေါ်ဆုံးက အကွက်ကို ရွေးနိုင်ရင် ပိုကောငး်တယ်။ပြီရင် next ကို ဆက်သွား။ ပြီးရင် save and exit ကို ရွေးလိုက် ။ကျန်ခဲ.တဲ. ဖရီးဒမ်း ၀င်းဒိုး တွေကိုလည်း save and exit ကို ကလစ်ပြီးထွက်။ စစချင်း၀င်းဒိုး ကို တော.start connection ကို နှိပ် တခါးကြီး ပွင်.လာပါလိမ်.မယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင်သုံးလို.ရပါပြီ။
မော်ဇီဇာ နဲ.သုံးမယ်ဆိုပါတော.။ မော်ဇီလာကိုဖွင်. Tools --- option --advend --- network---setting မှာ manual proxy configuration မှာ 127.0.0.1 port ကို 8080 လို.ဖြည်.ပေးပါ။ဒါဆိုရင် မော်ဇီလာကို ဖရီးဒမ်းနဲ.သုံးထားတာပါ။
ဂျီတော.ကို ဖရီးဒမ်းနဲ.သုံးမယ်ဆိုရင် ဂျီတော. setting --connection မှာ 127.0.0.1/8080 လို.ဖြည်.ပေးပါ။ အဆင်မပြေရင်တော. ပုံလေးတွေနဲ. ရှင်းပြပါ.မယ်။
Connection terminated.Server says:Authentication failed လို့ပဲပေါ်နေပါတယ်။:106:
stop connection ကို နှိပ်လိုက်5စက္ကန်.စောင်. ပြီးရင် start connection ကို နှိပ် စမ်းကြည်.လိုက်ပါဦး
အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ Connection နဲ့ကောဆိုင်ပါသလား။ကျွန်တော်သုံးတာက Wi Max , Speed 256 ပါ။
ကော်နက်ရှင်လည်းကောင်းဖို.လို.ပါတယ်။ကော်နက်ရှင်နဲ.လည်းဆိုင်ပါတယ်။wimax နဲ.တော.မသုံးဖူးလို.ကော်နက်ရှင်ကောငး်မကောင်းမသိပါဘူး။ကျွန်တော်သုံးနေတဲ. ဖရီးဒမ်းက အကောင်.မလိုပါဘူး။ ယူဇာနိမ်း sesawe ပတ်၀တ် sesawe နဲ.သုံးလို.ရပါတယ်။ မြန်မာလို.ဗားရှင်းလည်း ရတဲ.အတွက် ဘယ်လိုသုံးရမလဲလို.မေးတဲ. အကိုအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းချင်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးတာရှိပါတယ်။
Authentication failed ဆိုရင်တော့ Username နဲ့ password ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ထည့်ပြီး
Username နဲ့ password မှားရင် Authentication failed error တက် တက်ပါတယ်။